Heshiiska garoonka Muqdisho oo dib loo eegayo. – The Voice of Northeastern Kenya
Heshiiska garoonka Muqdisho oo dib loo eegayo.
Star FM November 29, 2018
Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka wasaarada Gaadiidka iyo Duulista hawada dowlada Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee magaalada Muqdisho.
Kulankaas ayaa waxaa looga hadlayay dib u naqashadaynta heshiiskii horay ay shirkadaas ugula wareegtay maamulka Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magalada Muqdisho,iyadoo heeshiiskaas laga muujiyay inay ku jiraan dulduleelo farbadan oo u baahan in dib loo habeeyo.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) ayaa sheegay in heshiiskaas Wasaaradu dib u eegis ay ku sameyneyso si heshiis Cusub ay ula galaan Shirkada Favori ee garoonka maamusha.
Waxa kale oo uu Tilmaamay inuu Rajaynayo heshiiska Cusub inuu Sanadkaan gudihiisa ay shirkadda la gaaraan,isla markaana uu noqdo mid wax badan ku soo kordhindoona howlaha garoonka.
Heshiiska Shirkadda Favori ee laga leeyahay dalka Turkiga ay kula wareegtay Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magalada Muqdisho waxaa la saxiixay sanadkii 2013 waxana gashay dowladii uu hoggaaminayay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
← Maxkamad ku taallo Filibiin oo saddex boolis ah ku xukuntay 40 sano
10 sano kadib AL-shabaab oo ka baxay magaalo muhiim ah oo ku taala bartamaha Soomaaliya. →